Maxaa lagu arkaa Corleone, magaalada maafiyada Sicilian | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Getaways Yurub, Italia
Waxaa jira meelo adduunka shineemo ku noloshay. Meelaha dhabta ah ee usha sixirka ee farshaxanka toddobaad uu weligiis taabtay. Haddayna shineemo ahayn, waa suugaan. Waa goobo ku riyooda, la doonayo, kumanaan jeer ay ku daawadaan daawadayaasha iyo akhristayaashu.
Dalka Talyaaniga waxaa jira meelo badan oo caan ku ah shineemo In kasta oo qofku samayn karo liis aad u tiro badan oo kala duwan, haddana waxaa jira mid aad u fiican oo Talyaani ah.: Corleone. Magaca ayaa isla markiiba loola jeedaa mid ka mid ah kuwii waaweynaa ee aflaanta shineemooyinka, kuwa aan qaab dhismeedka ka bixin, oo aan da 'weyneyn, u dulqaadanaya waqtiga iyo isbeddelada qaabka sheeko ahaan loogu sheegayo shineemo ahaan: Aabbaha.
1 Corleone, oo ku taal Sicily
2 Soojiidashada dalxiisyada waaweyn ee Corleone
3 Corleone iyo mob
4 Corleone, suugaan iyo shineemo.
5 Sida loo aado Corleone
Corleone, oo ku taal Sicily
Waa magaalo iyo wada-hadal taasi waa ee gobolka Palermo halkaas oo ku dhowaad 12 kun oo qof aan waxba ku noolayn. Waxay leedahay ku dhowaad 23 kun oo hektar iyo muuqaalka buuraha. Waxay ku taal meel waxyar ka badan 500 mitir dhererkeeduna qurux badan yahay.
Taariikhdeeda waxay soo bilaabatay waqtiyadii hore waxaana la rumeysan yahay in Griiggu ay soo mareen halkan iyo isla Carabtii, Norman iyo Aragonese illaa Corleone, oo ah magaca, uu si rasmi ah u helay aqoonsigiisa iyo qaabkiisa qarnigii XNUMXaad.
-sawir Corleone 1-
Buuro badan dhexdooda, waxa loo yaqaan 'Dragon Canyons' ayaa taagan, meel dalxiis qurux badan loo tago, oo lagu xardhay sariirta Webiga Ferattna oo u dhexeysa nuuradda iyo dhagaxyada karst ee qarniyo badan qaabeeya biyo-dhaca, godadka iyo balliyada.
Soojiidashada dalxiisyada waaweyn ee Corleone
Isagoo leh taariikh dhowr qarni ah waxaa jira soo jiidasho badan kuwaas oo ku yaalliin waqtiga waqtiga. Qeyb ahaan waxaa jira soojiidasho taariikhi ah iyo dhaqameed qeybna waxaa kujiraan soojiidasho dabiici ah.
Soojiidashada dabiiciga ah waxaa ka mid ah Keydka Dabiiciga ee Boregata Ficuzza, inta udhaxeysa Corleone iyo Palermo. Waa meel aad u wanaagsan oo lagu tamashleeyo maadaama loo tixgeliyo mid ka mid ah kaymaha ugu qanisan uguna soo jiidashada badan Sicily, oo ah goob ugaarsi hore u ahayd King Ferdinando ee Bourbon oo leh geedo badan. Gole del Drago iyo Cascata delle Due Rocche waa laba qurux oo dabiici ah oo karaameeya biyaha.
El Castello Sporano Waa meel dhagax ah oo ku taal bannaanka magaalada oo bixisa aragtiyo wanaagsan, oo ay ku jiraan biyo-dhacyo. Iskusoo wada duuboo xitaa waa burburka qalcaddii Saracen, oo la dhisay qiyaastii qarnigii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Magaalada lafteeda waxaan ku magacaabi karnaa keniisad hore ee Amarka Franciscan, maanta si gaar loo leeyahay oo booqdo Matxafka Madaniga ah iyo dhowr kaniisadood, oo ay ku jiraan Hooyo Chiesa u heellan San Martín de Tours.
Waxa kale oo jira Cathedral waxaa qoray San Martino Vescovo, laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii XNUMXaad, oo leh masaajiddo fara badan oo ku haysa khasnadaha runta ah taallooyinka alwaaxdii hore iyo alwaaxdii marmarka leh sawirrada baabtiiskii Masiixa. Kaniisad kale oo xiiso leh ayaa ah Chiesa dell'Addolorata, laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad oo leh sawiro badan iyo sawirro caan ah.
Corleone iyo mob
Corleone waa erey isku macno ah maafiyada Sicilian Hagaag, halkan wuxuu ku dhashay qarnigii XNUMX-aad mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha maafiyada, Toto Riini, La Bestia, oo loo yaqaan magacan arxan darradiisa. Ugu dambeyntiina waa la xiray laakiin raadadka dhiigga looga tagay waa mid aad u weyn.
La taariikhda Corleone iyo maafiyada Sicilian waxaad ku garan kartaa CID, MA, xarun la furay bishii Diseembar 2000 iyadoo uu goobjoog ahaa xitaa madaxweynihii Talyaaniga. Dhammaan waa inay ku xirnaato la dagaalanka maafiyada waxaana jira dukumentiyo badan oo maxkamadeed oo ay ku jiraan bayaano iyo qirasho. Waxa kale oo jira a sawir sawiro dil mobster oo ay sameysay Letizia Battaglia, oo soo qabatay faahfaahinta cajiibka ah ee waxa maafiyada ay sameeyeen sanadihii 70s iyo 80's.
Hal qol gaar ahaan wuxuu gaaraa wadnaha, waxa loogu yeero Qolka Xanuunka, oo ay ku jiraan sawirrada gabadha Battaglia, oo raacsan tallaabooyinka sawir ee hooyadeed, oo ay la socdaan sawirro waxa ficillada maafiyada ay ka tagtay, xanuunka, dhimashada, qoyska, jacaylka.
Corleone, suugaan iyo shineemo.
Mario Puzo waa qoraha buugga sheekada The Godfather. Waxaa laga yaabaa inaad taqaanid filimada laakiin aadan aqoon sheeko-waaga waana inaad aqrisaa. Francis Ford Coppola wuxuu ku saleysnaa filimkiisa trilogy taas oo dabeecadda Vito Andolini, oo uu jilayo Marlon Brando, ay ka haajirtay Corleone oo ay u dhoofayso Mareykanka waxayna ku dambaynaysaa ku dhawaaqista magaaladiisa inuu yahay magaca qoys ee caanka ah Ellis Island.
Laakiin Burcadda Corleone waa ka hor taariikhda Puzo dhammaadkii qarnigii XNUMX-naadna maafiya ayaa ku taal geeskan Talyaaniga. Uguyaraan sagaal gaangis ah ayaa cinwaano cinwaan ka dhigay qarnigii XNUMXaad, markaa waad ka dhadhansan kartaa ruuxa Corleone.
Laakiin Corleone-ka shineemo shine Corleone asalka ah? Wax badan maahan. Francis Ford Coppola wuxuu ka duubay meelo kale sida tuulooyinka Forza d'Agiro iyo Savoca, ee gobolka Messina. Uma tixgelin in tuulada Corleone, oo isu badashay magaalo yar, u adeegtay in ay u sheegto sheekada maafiyada sidaa darteed wuu u guuray, laakiin taasi micnaheedu maahan in qawlaysato badan oo muhiim ah ay ka tageen Corleone iyagoo aaday aagga New York iyo New Jersey, Mareykanka.
Ka fikirida filimada aad ka heli karto Baarka Vitelli, taas oo markii ugu horreysay Michael uu indha indheyn ku sameeyo cidda noqon doonta xaaskiisa ugu horreysa ee uu jecel yahay. Baarkaan wuxuu joogaa Savoca, tuulo u dhow Taormina, bariga Sicily. Waxa kale oo jira kaniisad uu ku guursado Michael Corleone. Magaalada kale, Forza d'Agro, waa kaniisadda kale ee ka muuqata muuqaalka 'The Godfather 2' oo Vito uu ugu baxsaday Mareykanka dameer ku qarsoonaa halka ay cadawgiisu raadinayaan.
Sida loo aado Corleone
Tuulada Corleone Ma laha xarun tareen, wax caadi ka ah tuulooyinka badan ee buuraha ku yaal ee Sicily. Gaadiidku aad buu u xadidan yahay laakiin wali wuu socdaa waxaa jira basas ka tagta Palermo oo mas'uul ka ah Azienda Siciliana Trasporti, AST.
Laakiin shaki la'aan, haddii aad xiisaynayso booqashada Corleone, ugu fiican ee aad sameyn kartid waa kireysasho gaari oo iskaa u soco. Taasi waxay ku siin doontaa leexasho badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Italia » Corleone ee Sicily, oo ah sariirtii maafiyada ee rabtay inay joojiso inay mid noqoto
Aad ayaan u fiicanahay waxaan ahay taageerayaasha ilaahyada waxaanan jeclaan lahaa inaan la kulmo Corleone, waad ku mahadsantahay aqrintaada
Haye Sara !!!! Waxaan hayaa, aan dhahno, xiriir aan la leeyahay Corleonese. Magaalada lafteedu ma ahan heshiis weyn laakiin dadku waa dad aad u fiican, saaxiibtinimo leh oo furan. Ma dareemaysid sida maafiyada oo dhan. Filimku wax shuqul ah kuma lahan iyaga, waxaan ula jeedaa in magaca caanka ah ee Devito uusan halkaas ka soo jeedin, waa sheeko mala-awaal ah, laakiin dadka reer Corleonese wax badan baa laga qabaa. Ma jiro hal tixraac oo magaalada ku saabsan filimkan, oo aniga iga yaabiya, maaddaama halkan Isbaanishka ah ay mar hore degeen goob dalxiis. Hadaad wax rabto, waxaan aadayaa bisha Ogosto markale. Salaan Maria
Laakiin sidaas oo ay tahay, dibedda ayaa leh "cabsida" fikirka iyo aaminsanaanta in qofkastoo ku soo eegaa uu saaxiib la yahay xiriir qaar ka mid ah maafiyada iwm iwm. iyo martigelinta, waa inay ahaato caano. Sidee raaxo u tahay inay ahaato. ala Maria! Markaan guursado Sara waxaan ku mari doonnaa bisha Malabka. LOL. Dhab ahaan ... tuulooyinka noocan oo kale ah waa inay ahaadaan kuwo aad u fiican oo martigeliya.
Dabcan ma jiro wax xiriir ah oo lala leeyahay filimka, marka loo eego dareenka adag. Runtu waxay tahay, wax walba waa la daboolay si aysan u muuqan wax muuqda ... Laakiin wax walba oo ka mid ah xaqiiqda dhabta ah, Provenzzano maahan sheeko.
Ku jawaab Vicenzzo Corleone
Waxa aan ogahay oo dhan ... Laakiin sixirka ah in aan noqdo akhriste buugga oo aan marar badan arkay filimada ... Ka bogaanshaha Coppola iyo Puzo ... Brando iyo Pacino ... magaalooyinka ku hareeraysan halkaas oo ay sidoo kale filimaan ka duubeen.
Waxaan ka tirsanahay degel ka mid ah The Godfather oo dhammaan magaalooyinkii lagu duubay qaybo kala duwan lagu magacaabay.
Oo sidii qof hore u sheegay, magaalooyinkaas waxay leeyihiin sixir gaar ah
Ku jawaab Cristhi
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado magaalooyinka lagu duubey qaybo ka mid ah filimka, tan iyo bishii Sebtember waxaan joogi doonaa Sicily.
mar hore mahadsanid
Ku jawaab Roque
Nabade Cristhi. Sikastaba, hadaad jeceshahay inaad booqato goobaha uu ku yaal Aabbaha, waxaan usii gudbin doonaa xaqiiqda ah in aan si dhab ah looga duubin magaalada Corleone (gobolka Palermo), laakiin lagu duubay Forza d'Agro (gobolka Messina). Waan joogay. Magaalooyinka Sicilia waa qurux.
Jawaab Gustavo F. Monastra
Anigu waxaan ahay taageere aabbaha, waxaan garanayaa iyaga qalbigeyga 3. Waa inuu jiraa tixraac, markii Vito uu dameerka ka baxsado oo qowlaysatada Don Ciccio ay raadiyaan isaga, kaniisadaasi ma jirto? ma corleone =?
Xaqiiqdii laguma tooganin Corleone (Palermo), laakiin waxaa lagu toogtay Forza d'Agro (gobolka Messina). Hadaad google "Forza d'Agro" google, waxaad arki doontaa kaniisada caanka ah ee aad dhahdo.
Salaan ... Waxaan jeclaan lahaa inaan maalin uun lug ku maro waddooyinka Corleone maadaama ayeeyday dhimatay ay ku dhalatay magaaladaas oo ay had iyo jeer ii sheegto sida ay u wanaagsan tahay.Inkastoo aysan ila joogin haddana waxaan doonayaa inaan ka dhabeeyo riyadii # socodka jidadkeeda.
Ku jawaab amiir
farshaxanka arturo dijo
waad salaaman tihiin waad ogtihiin filimka ugu fiican qarniyadii oo dhan shaki kuma jiro aabbahay wuxuu u hambalyeynayaa qof kasta oo ku nool magaalada aabbahaa oo ay tahay inuu ku faano inuu ka mid yahay VITTO CORLEONE ilaa waqtiga soo socda
Ku jawaab fanaanka arturo
Anigu waxaan ahay taageere aad u weyn The Godfather waxaanan jecelahay inaan barto magaalada Corleone, gaar ahaan goobta lagu dilay Don Vito hooyadeed (sida aan qabo, taas oo lagu duubay Corleone). Waxaad arki kartaa dhadhan dhab ah oo ah Hambalyo dadka degan halkaas waxaan u maleynayaa inay tahay inay ku faanaan magaca magaaladooda.
Dhammaan dadka jecel Godfather, in kasta oo magaalada la magacaabay ay tahay Corleone, haddana waxaa si dhab ah looga duubay magaalo ku taal buur kor ka fiirisa Badda Ionia ee xeebta bari ee Sicily. Magaaladaan, aad uga qurux badan xitaa tan Corleone, waxaa lagu magacaabaa Forza d'Agró. Waxaan joogay 1990.
Jawaab Gustavo Monastra
hello weyn taageerayaasha saga ee godfather, oo ah mid kamid ah filimada ugu wanaagsan taariikhda weyn ee LOS CORLEONE ...
Ku jawaab Rodrigo reyes ortega
Waxay ila tahay magaalo aad u qurux badan, in kasta oo magaceeda aan laga jeclayn dadka degan, haddana wali waa magaalo aad u qurux badan oo halkan ku taal Venezuela waxaan ku qiimeynaa waxyaabaha sidaas ah!
Jawaab Nefinho Corleone
Waxaan u maleynayaa in waxaas oo dhami ay aad u xiiso badan yihiin laakiin runtu waxay tahay in ruuxii nooleeyay gobolkan uusan ahayn COPPOLA filimadiisa, ee ay ahayd MARIO PUZO oo qoray buugga "The Godfather" iyo kuwo kale oo badan oo la xiriira Mafia Sharaf yaa sharaf mudan maadaama aan ku jirno shaqadan. Iyo haa, haddii aan jeclaan lahaa inaan ogaado CORLEONE.
Jawaab Sergio Nolasco
Waan jeclahay talyaaniga taariikhdeeda darteed, waxaan arkay sawirada Corleone iyo faallooyin suugaaneed buugaag iyo joornaallo, waa sidii lagu arkay magaalo qurux badan oo ka mid ah baadiyaha Yurub, gaar ahaan qarniyadii dhexe.
Ma aqaano sababta uu ula xiriiro maafiyada talyaaniga, taasi waxay siineysaa taabasho taban, ma jecli, maxaa yeelay ehelkeygii hore waa Talyaani.
Ku jawaab lizardo veramendi
Ma garanaysid sababta Corleone uu ugu xidhan yahay maafiyada? Ma noqon kartaa maxaa yeelay qabiilka ugu muhiimsan ee maafiyada ayaa halkaa ka yimid? Leggio, Salvatore Riina, Bagarella, Bernardo Provenzano, iwm.
Macluumaad ku saabsan sida loo aado Iceland
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato inaad ku safarto xayawaan rabaayadeed